Dr. Moe Aung Kyaw Naing – Healthy Life Journal
Dr. Moe Aung Kyaw Naing
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)
Posts By Dr. Moe Aung Kyaw Naing
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. Vitamin B2 သောက်ပါက မည်သည့်ကျန်းမာရေးကို မည်သို့အကျိုးရှိသည်ကို သိလိုပါသည်။ A. ဗီတာမင် B2 အကြောင်း မပြောခင် ဗီတာမင်ဓာတ်တွေအကြောင်းကို အရင်ပြောချင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဆိုတာ သြဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်က...
HIV မှာ Not detected ပြရင် . . .
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. HIV မှာ Not detected ပြရင် အကာအကွယ်မဲ့ ယောင်္ကျားမိန်းမ အတူနေရင် HIV Virus မကူးဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားခင်ဗျ။ A. မကူးဘူးဆိုတာထက် ကူးစက်မှုနှုန်း အလွန့်အလွန်လျော့နည်းတယ်လို့...
ဓာတ်စာအကြောင်း သိချင်လို့ပါ . . .
—–၊ ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. အခုအခါ ဈေးကွက်အတွင်း ကြော်ငြာကောင်းကောင်းနဲ့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံပေါင်းစုံ (အထူးသဖြင့် ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်)က ဈေးကြီးစွာနဲ့ ဓာတ်စာဆိုတဲ့ ဆေးဝါးတွေ လိုက်လံရောင်းချလျက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီဓာတ်စာဆေးဝါးတွေက FDA ခွင့်ပြုချက်နဲ့...